Sinôgrama notsorina - Wikipedia
Ny sinôgrama notsorina na soratra sinoa notsorina dia anisan'ny fomba fanoratana ny fiteny sinoa. Izy ireo dia ampiasaina ao amin'ny Repoblika entim-bahoakan'i Sina sy any Singapaoro. Izy ireo dia samihafa amin'ny sinograma nentindrazana ampiasaina any Hong Kong, Macao, Taiwan ary any Japana (hijery ny lahatsoratra kanji ho an'ny fampiasana ny sinôgrama amin'ny fiteny japoney).
Ny sinograma notsorina dia tenenina hoe 简化字 (簡化字) ou 简体字 (簡體字) ; hanyu pinyin : jiǎnhuàzì na jiǎntǐzì.
Hanzi amin'ny sinograma nentindrazana
Hanzi amin'ny sinograma notsorina
Tamin'ny 1909, i Lu Feikui, mpanoratra ao amin'ny Jiaoyu Zazhi (Gazetin'ny Fianarana) dia namoaka hevitra momban'ny « soratra manana endrika malaza » (俗体字) ao anaty famelabelaran-kevitra nivoaka tanatin'ny magazine-ny. Tamin'ny 1922, i Qian Xuantong dia namoala fomba valo fanatsorana ny soratra sinoa. Avy amin'io ny fanatsorana ofisialy no hivoaka.
Tao aorian'izay, nolazaina fa manakana ny modernizasiônan'ny sina ny soratra sinoa (nentindrazana), amin'ny fivoaran'ny haisoratra ary manakana ny mponina hahay hanoratra.
Tamin'ny fahahtongavan'ny kômonisa, nisy ny refôrma momban'ny soratra. Ny tanjon'izy io dia nanamora ny fanoratana ny sinôğrama mba hanamora ny fianarana azy ary mamorona abidy ara-drafipeo mifototra amin'ny litera latina, ny hanyu pinyin, mba hanolo tsikelikely ny fanoratana logografika.
Tamin'ny 28 Janoary 1956, navoaka ny lisitra voalohany misy ny lisitry ny soratra notsorina. Izy io dia manana fizarana telo :
Ao amin'ny voalohany dia misy sinograma 230 mifototra amin'ny fanatsorana nataon'ny vahoaka ;
Ao amin'ny faharoa dia misy 285 sinograma natolotra, mbola iadin-kevitra hatramin'izao ;
Ao amin'ny fahatelo dia misy 54 fiaron-tsinograma natolotra, mbola iadin-kevitra ankehitriny ;
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinôgrama_notsorina&oldid=647571"
Voaova farany tamin'ny 16 Aogositra 2013 amin'ny 17:22 ity pejy ity.